Teôlôjian' ny fanambinana - Wikipedia
Teôlôjian' ny fanambinana
Ny teôlôjian' ny fanambinana (antsoina koa hoe filazantsaran' ny fanambinana na filazantsaran' ny fahombiazana) dia finoana ara-pivavahana evanjelika izay milaza fa ny Baiboly dia mampianatra fa ny fananan-kataon' ny Kristiana dia mariky ny fahasalamana ara-panahy ary ny fahantrana dia ozona na sazy avy amin' Andriamanitra.
Ny teôlôjian' ny fanambinana dia niely teo amin' ireo taona 1970 sy ireo taona 1980 tany Etazonia, indrindra tamin' ny alalan' ireo televanjelista pentekôtista sy karismatika.
Ny tena mpiaro an' io fampianarana io dia ny pasitera amerikana, toa an' i Kenneth Hagin miaraka amin' i Michael Horton. Ny sasany amin' ireo olo-malaza ao aminy, toa an' i Paula White, i Kenneth Copeland na i Edir Macedo, dia nanohana ireo mpitarika ara-pôlitika toa an' i Donald Trump na i Jair Bolsonaro. Ny filazantsaran' ny fanambinana dia niorim-paka tany Frantsa, indrindra teo amin' ny vakin-tanàna onenan' ny mpiasa tsotra, nanomboka tamin' ny faramparan' ireo taona 1980, tany amin' ireo fiangonana toy ny Église universelle du royaume de Dieu (pôrtogey: Igreja Universal do Reino de Deus), ny Paris Centre chrétien, ny Charisma na koa ny Impact Centre chrétien.
Io foto-pampianarana io dia mifototra amin' ny fampianarana ny finoana kristiana ho fomba iray atao hampanan-karena, amin' ny alalan' ny "fiaiken-keloka miabo" sy fandraisana anjara amin' ny asa fanompoana kristiana.
Ao amin' ny fiangonana evanjelika sasany, ny lohahevitra momba ny fanambinana, mifandray amin' ny ampahafolon-karena tsy maintsy atao sy amin' ny fanatitra, dia manana ny fotoany betsaka amin' ny fanompoam-pivavahana tsirairay. Misy ny tompon' andraikitra manara-maso akaiky ny fanomezana eo ataon' ny mpino, mba hanombanana ny fandrosoany ara-panahy. Ny fampanantenana fanasitranana sy fanambinana avy amin' Andriamanitra dia azo antoka amin' ny alalan' ny tentim-bidim-panomezana sasany. Ny fahatokiana amin' ny fahafolon-karena dia ahafahana manalavitra ny ozon' Andriamanitra sy ny famelezan' ny devoly ary ny fahantrana.
Io firehana evanjelika io, araka ny voalazan' i Stéphane Lavignotte izay pasitora prôtestanta ao amin' ny Mission populaire, dia aingam-panahy avy amin' ny "teôlôjian' ny famaliana" ao amin' ny Testamenta Taloha: "Teôlôjia miasa amin' ny fotoana rehetra izany: manolotra ny ainao ho an' i Jesosy ianao, manome ny volanao, raha mandaitra izany dia tsara, raha tsy mandaitra dia angamba tokony handinika ny fitondran-tenanao ianao.".
Tsikera[hanova | hanova ny fango]
Nanomboka tamin' ny taona 1970 dia nisy tantara ratsy ara-bola isan-karazany momba ny fanodinkodinam-bola tany amin' ny fiangonana sy ny fikambanana evanjelika maro. Ny Evangelical Council for Financial Accountability dia naorina tamin' ny taona 1979 mba hanamafisana ny fahamatorana ara-bola ao amin' ny fikambanana sy fiangonana evanjelika izay maniry ny ho mpikambana, ary manaiky an-tsitrapo fanaraha-maso ny fitanana kaonty isan-taona.
Tamin' ny taona 2012, ny Conseil national des évangéliques de France dia namoaka antontan-taratasy manameloka an' io foto-pampianarana io, milaza fa ny fanambinana dia afaka miseho amin' ny mpino, nefa ny fanindrahindrana tafahoatra an' io teôlôjia amin' ny faratampony dia mitarika ho amin' ny fitiavan-karena sy amin' ny fanompoan-tsampy, izay tsy ny tanjon' ny Filazantsara akory.
Matetika mifandray amin' ny ampahafolon-karena tsy maintsy atao io foto-pampianarana io ka indraindray dia ampitahaina amin' ny raharaha fitadiavan-karena ara-pivavahana.
Tany Etazonia dia maro ireo televanjelista nangataka fanatitra hividianana fiaramanidina ho azy ireo manokana.
Ireo pasitora pentekôtista izay mifikitra amin' ny teôlôjian' ny fanambinana dia notsikerain' ny mpanao gazety noho ny fomba fiainan' izy ireo maneho fananan-karena (akanjo mirentirenty, trano lehibe, fiara avo lenta, fiaramanidina manokana, sns.).
Ireo "pastora" manohana io teôlôjia io dia hita any Afrika, any Amerika Latina, any Azia ary any Eorôpa koa ankehitriny. Ny hafatr' izy ireo hoe "arakaraka ny haben' ny afafinareo no hojinjainareo" dia mifototra amin' ny "lalàn' Andriamanitra momba ny famaliana zato heny": "Manomeza 10 eorô ianao, dia homen' Andriamanitra 1 000!". Izany anefa dia mandany fananana ireo Kristianina an-tapitrisany isan' ny mahantra indrindra izay mino fa amin' ny fanomezana ho an' ireo "teôlôjianan' ny fanambinana" hatramin' ny ampahatelon' ny karamany, dia hampitomboin' Andriamanitra avo zato heny ny fanomezany. Mahagaga fa ao amin' ireo Evanjelika izay nanakiana indrindra teo amin' ny tantara ny "indolzansy manontolo" izay nahafahan' ny Katôlika hahazo toerana ao amin' ny paradisa, amin' ny fandoavam-tsarany, no miroborobo ny varotra ataon' ny "mpaminanin' ny fanambinana".
Nanamafy ny Papa Fransoà tamin' ny toriteny nataony tao amin' ny Tranon' i Sainte-Marthe ny 5 Febroary 2015 fa "tsy teôlôjian' ny fanambinana ny famonjena". Ho an' i Fransoà dia tsy maintsy mitory ny Evanjely "ao anatin' ny fahantrana" ny Fiangonana ary tsy maintsy manana tanjona tokana hanamaivanana ny fahorian' ny mahantra ity fanambarana ity, ka tsy hanadino velively fa asan' ny Fanahy Masina izany fanompoana izany fa tsy herin' olombelona. Nohamafisin' i Fransoà ny fanakianana nataony tamin' ny fisaintsainana notononiny ny 19 Mey 2016 teo amin' ny lasapelin' ny Tranon' i Sainte-Marthe, izay nilaza fa "diso" ny fiheverana fa "Andriamanitra dia mampiseho anao fa marina ianao raha manome anao harena be dia be".
Tamin' ny taona 2018, ny gazetiboky zezoita italiana akaikin' i Vatican La Civiltà Cattolica dia nanao famakafakana mitsikera an' io fiseho evanjelikan' ny nofinofy amerikana io, izay nahitana ny "fanandramana fanamarinana ara-teôlôjia ny neôliberalisma ara-toekarena".
Tamin' ny taona 2020 tany Frantsa, dia nisy fiangonana izay nolazaina tao amin' ny Miviludes noho ny antony mifandray amin' ny fanararaotana an' io teôlôjia io.
Teôlôjian' ny fanafahana
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Teôlôjian%27_ny_fanambinana&oldid=1041462"
Voaova farany tamin'ny 12 Desambra 2021 amin'ny 14:28 ity pejy ity.